Ma Ku Maalgashanaysaa Waxyaabaha Xayeysiinta ah? | Martech Zone
Ma Ku Maalgashanaysaa Waxyaabaha Xayeysiinta ah?
Khamiista, Sebtember 20, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii ​​waxaa i casuumay kooxda at Istaraatiijiyadda Goobta inay ahaadaan iyaga Edge bandhigga raadiyaha Webka iyo inaan la hadlo qaar ka mid ah ardayda Isgaarsiinta Warbaahinta Cusub oo ka soo degtay IU Kokomo inay nala hadlaan. Waxay ahayd dhacdo fantastik ah ardayduna waxay ahaayeen kuwo xamaasadaysan waxayna weydiiyeen tan su'aalo ah - kuma eka kaliya warbaahinta cusub laakiin guud ahaan ganacsiga. Waxay ahayd mid si aan caadi ahayn u dhiirrigelisay in la arko sida ay dareenkooda horeba u ahaayeen.
Markii aan tago dhacdooyinkan, marwalba waxaan isku dayaa inaan keeno nooc ka mid ah waxyaabaha xayeysiinta ah. Markan waxaan keensaday xoogaa 4Gb USB drives ah DK New Media sameeyey ePromos.
Xayeysiinta USB-yada ee xayeysiinta ah ayaa si dhaqso leh loo garaacay ka dib markii labo arday ay arkeen, waxaan haystay arday badan oo igu hareeraysan. Dadku waxay jecel yihiin waxyaabaha xayeysiinta ah… gaar ahaan markay waxtar leeyihiin. Sida suuq geyn kasta, waxaa jira lacag fiican oo la kharash gareeyay iyo lacag xun oo la qarash gareeyay, in kastoo. USB drives ma ahan kuwa raqiis ah, gaar ahaan markay yihiin 4Gb :). Si kastaba ha noqotee, adoo siinaya shey dhiirrigelin qiimo leh, waxay bixisaa dareen ah tayada iyo kala-soocidda aan jeclaan lahayn in dadku ku xirmaan shirkadeena.
Ha ku yareynin waxyaabaha xayeysiinta ah. Waxay calaamad u noqon kartaa rajadaada inaad tahay nooca wax iibiyaha ee ka dul dhacaya iyaga!
Ku saabsan ePromos: Dib ayaan ka dalbaday ePromos dhowr jeer hadda oo runtii waan ku qanacsanahay adeeggooda iyo waxay bixiyaan. Darawalada si fiican ayaa loo daabacay, oo la muujiyey waqtigooda oo si fiican loo soo baakadeeyey, oo waxay lahaayeen qiimo dhimis aad u xoog badan oo aad u xoog badan. Waxyaabaha kale ee aan ku qanco ePromos waa inay diraan emaylkeena "Waqtiga Dib-u-dalbashada" qiyaastii bil kadib markaad dalbato shay qiimo dhimis leh si aad dib ugu dalbato. Waa xusuusin aad u fiican si loo hubiyo keenistaada alaabooyinka xayeysiinta iyo dib u dalbashada markii loo baahdo!
Tags: epromoswaxyaabaha dhiirrigelinta dhacdadahorumarintawaxyaabaha xayeysiinta ahsagwagusb drives
e-Akhriska oo kor u kacay
Waa maxay sababta Walmart ugu dammaanad qaadayso Bulshada Hyperlocal
Hadiyado dhiirrigelin ah
Hadiyadaha la kafaala qaaday ayaa dhisi doona adduun kala soocid ah iibinta maaddaama macaamiisha ay ku hayaan waqti dheeri ah intii aad iska tuuri lahayd ama iska indhatiri lahayd sida xayaysiisyada kale.